Conduragon (ကွန်ဂျူရန်ဂို) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Conduragon (ကွန်ဂျူရန်ဂို)
Conduragon (ကွန်ဂျူရန်ဂို) ကဘာလဲ။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို )ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Condurango ကို အစာမကြေခြင်းနဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို စားချင်စိတ်ဖြစ်အောင်လည်း သုံးကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးမှာ Condurango ကို သွေးတိတ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ခံတွင်းပျက်ခြင်းနဲ့ ကာလသားရောဂါ ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို )ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Condurango ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Condurango မှာပါတဲ့ tannins တွေဟာ သွေးတိတ်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး အနာကျက်ဖို့ အားပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Condurango ကို အပူနဲ့ ရေငွေ့ရှိတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး အေးမြ ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပါတယ်။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးနို့တိုက်မိခင်တွေမှာ Condurango ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Condurango ကို အသည်းရောဂါ၊ အတက်ရောဂါ၊ ဒီဆေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဆေးတွေကို မတည့်တဲ့သူတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Condurango ဟာ အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
•	တက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အသည်း ပျက်စီးခြင်း
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Condurango ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Condurango ကို အသုံးပြုရမယ့် ဆေးအချိုးအစားက ဒီဆေးရဲ့ ပုံစံပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
• သစ်ခေါက်: 2-4 g နေ့စဉ်
• Extract: 0.2-0.5 g နေ့စဉ်
• Fluid extract: 2-4 g နေ့စဉ်
• Infusion: အမှုန့်ကြိတ်ထားတဲ့ အခေါက်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းစာထည့်ပြီး ရေပူပူ ၂၅၀ ml ထဲမှာ ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် ထားသင့်ပါတယ်။
• တင်ချာရည်: 1-2 ml or2g နေ့စဉ်
• Water extract: 0.2-0.5 g နေ့စဉ်
Condurango ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Condurango (ကွန်ဂျူရန်ဂို ) က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Condurango ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
•	Fluid extract
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 10, 2017
Print version. Page 202.
Conduragon. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 631-condurango.aspx?activeingredientid=631&activeingredientname=condurango. Assessed August 7,2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.
Conduragon. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 631-condurango.aspx?activeingredientid=631&activeingredientname=condurango. Assessed August 7,2016.
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, လိင်ပညာပေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း